Wednesday February 26, 2020 - 19:01:29 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Kalimadda oo la dhageysan karayo muddo 20 daqiiqo ah ayuu Sheekhu ugu horrayn dadka Waqooyi bari ku dareensiiyay xiriirka walaaltinimo ee kala dhaxeeya 'Mujaahidiinta' oo ka kooban wada dhalasho, xigto iyo xigaal iyo walaaltinimada kalimadda Tawxiidka taas oo keenaysa isku damqasho iyo in jir qura la wada noqdo.
Wuxuu reer NFD dareensiiyay dhibaatooyinka gummeysi ee ay Kenya kala kulmayaan kana mid yihiin xarigga dhallinyaradooda boobka iyo gubista suuqyadooda iyo kutumashada xurumaadkooda guud xilli halka sidaa lagula dhaqmayo uu yahay dhulkoodii ay gaarka u lahaayeen.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu tilmaamay in Kenya aanay intaa ku ekeysan balse ay kasoo tallawday xuud beenaadka islamarkaana ay duqeymo wuxuushnimo ah u geysatay maatida, hase ahaateen ay heshay wax ka duwan wixii ay filanaysay oo ah iska caabin adag iyo dharbaaxooyin waaweyn sida weerarkii Westgate, kii Jaamacadda Gaarisa, Mpikatoni iyo kuwii lamid ahaa oo jawaab u ah xasuuqyadii Waagala iyo Gaarisa Gubaay.
"Iyadoo laga duulaayo walaaltinimada Islaamka iyo u nusreynta mustadcafiinta iyo soo celinta dhulalka islaamka ayay walaalihiina Xarakatu-Shabaab Al-Mujaahidiin idiin soo gurmadeen da Mujaahidiinta Al-Shabaab idiin soo gurmadeen si ay dhulkiina idiinku soo celiyaan, gaalada ku xidideysatayna uga xidido siibaan, si aad u xorowdaan, aayihiinana ugu madax -bannaanaataan, wiilashiina Mujaahidiinta garab iyo gaashaan u noqda” ayuu bulshada Wuqooyi Bari ku yiri Sheekh Cali Dheere.
Wuxuu ugu baaqay in ay soo dhaweeyaan Mujaahidiinta si loo xaqiijiyo ahdaaf badan, haddii ay taa dhici waysana ay waligood dusha ka saarnaan doonto heeryada gumeysiga.
"Kenya waa tan maanta mar kale u gogol xaaranaysa iney xasuuq kale ka geysato gobolka Waqooyi Bari iyadoo ku andacooneysa kuna eedeeneysa Muslimiinta Waqooyi Bari ku nool iney ka hor tagi waayeen Mujaahidiinta, markii ay Kenya dagaalka ay Wilaayaadka islaamiga ah kusoo qaaday ku hungowday, jab iyo haziimo qaraarna ay kala kulantay, markey aragtay Mujaahidiintii oo xuduud beenaadka intey kasoo tallaabeen gaalada dhagta dhiigga u daraya, guryahoodii iyo gaadiidkoodiina gubaya, dhanka kalana Musliniinta dhiiggooda badbaadinaya, gaaladana ka dhex soocaya waxa kaliya ee lagu kala soocayana ay tahay Tawxiidka ( ) ayaa waxay Kenya maciin biday iney ummadda Muslimka ah ee ka badbaaday xasuuqii Gaarisa iyo Waagala, maanta gargaar weydiisato” ayuu yiri Sheekh Cali Dheere!.
Xaaladda Kenya ayuu ku tilmaamay mid rafasho ah (nin daad qaaday xumbo cuskay) dhanka kale wuxuu dadka Muslimiinta ah uga digay in ay Kenyaatigaasi garab u noqdaan sababtoo ah wuxuu soo bandhigay nusuus badan oo mamnuucaysa in lagu garab istaago naf, maal iyo af intaba.
Qofkii sidaa sameeyana uu uga baxayo Diinta Islaamka, Sidoo kale wuxuu uga digay in ay ku kadsoomaan Siyaasiyiinta ay Kenya gobolka ku leedahay oo uu ku tilmaamay fulayo, fuliya ujeedooyinka gumeystaha oo haba yaraatee wax damiir ah lahayn. Wuxuu tibaaxay in ay sii wadayaan weerarada ay ku beegsanayaan Kenyaatiga aan muslimka ahayn, nooc walba oo ah ahaadaan.
Dhan kale wuxuu reer Waqooyi Bari kula taliyay in ay isku tashadaan kana maarmaan shisheeye aanan wax arxan ah u heyn, wuxuuna yiri: "Muslimiinta ku nool gobolka Waqooyi Bari waxaan ugu baaqeynaa iney isku tashadaan, waxaana kalsooni ku qabnaa iney karti iyo aqoon ku filan u leeyihiin oo ay heli karaan macallimiin Muslimiin ah, dhaqaatiir Muslimiin ah iyo aqoonyahanno Muslimiin ah intaba, mana muuqato sabab ay ugu baahan yihiin gaalada Kenyaatiga ah, waayo, waxaa shaqo la’aan ah dhaqaatiirtii, Injineeradii iyo macallimiintii Muslimiinta ahaa ee u dhalatay gobolka Waqooyi bari. Dhallinyaradii jaamacadaha ka baxday ayaa shaqo la’aan ah, marka miyeysan ka mudnayn inaad iyaga fursad siisaan”
Si kastaba ha ahaatee, kalimadda Sheekh Cali Dheere Afhayeenka Xarakada Al-Shabaab ayaa kusoo aadaysa xilli ay aad usii kordheen weerarada ay dagaal yahanada Al-Shabaab ka fuliyaan gobolka Waqooyi Bari iyo Lamu, iyadoo weerarkii ugu dambeeyay uu xalay ka dhacay tuulada Dabasiti oo hoos tagta Ceelwaaq Kenya, halkaasoo lagu burburiyay shirkadda isgaarsiinta Safaricom ee dowladda Uhuru.
Saldhigga ciidanka Itoobiya ee degmada Waajid oo weerar culus lakulmay.
iska hor'imaad sababay dhimashada 10 qof oo waqooyiga Muqdisho ka dhacay.